Ezimuncu kubaculi ngesikhungo sabo | Isolezwe
Ezimuncu kubaculi ngesikhungo sabo
Isolezwe / 12 July 2012, 1:16pm /
IBHANTSHI lizogcwala umoya kubaculi basesitebeleni somculo esilawulwa nguhulumeni waKwaZulu-Natal, iKZN Music House, kulandela ukwehla kwesabelozimali ebesisithola okwenza kube wumqansa ukuqhubeka nokufukamela abaculi.
Lezi zindaba zitshelwe abaculi abakulesi sikhungo esisenkabeni yeTheku emhlanganweni obungoLwesibili ukuthi kukhona okuzomele bakhululwe ezinkontilekeni zabo ngenxa yokuthi sentula imali.
Ngokwe-website yeKZN Music House, lesi sikhungo sinabaculi abangaphezulu kuka-25 okubalwa kubona uSosha, Bullistic, Afro Soul, Mfiliseni Magubane, DJ Mlisa, Nondumiso Tembe, Mbongeni Ngema (okuyinkampani yakhe iCommitted Artists esengamele) nabanye.
Omunye wabaculi obekhona kulo mhlangano obuseMusic House ocele ukungadalulwa uthe kulo mhlangano obekukhona kuwona uMbongeni Ngema noNkk Thandekile Mqadi oyisikhulu esiphezulu, batshelwe ukuthi uMnyango wezobuCiko namaSiko wabele lesi sikhungo imali encane.
“Kuthiwe isikhungo asisekho eMnyangweni wezokuThuthukiswa koMnotho nezokuVakasha ngakho uMnyango wezobuCiko namaSiko uzonika isikhungo imali encane. Le mali incane kangangokuba ngeke ize imelane nathi sonke njengoba sibaningi ngakho kuzodingeka kuphungulwe abaculi,” kusho lo mculi.
Uqhube wathi abaculi abazodilizwa bazobizwa ngamunye ngamunye banikezwe izincwadi zabo ezibazisa ukuthi kabasadingeki.
“Lokhu kusho ukuthi uma bedinga ukuzoqopha kuzomele bakhokhe imali yokuqasha istudiyo. Asilazi ikusasa lethu ukuthi likuphi,” kusho lo mculi ekhathazekile.
Kuthintwa uNkk Mqadi uthe ngeke aphawule ngalolu daba kodwa bazoveza konke esithangamini sabezindaba abasihlelayo.
“Ngiyahluleka wukuniphendula ngamunye ngamunye ngoba nifona ngokwahlukana. Sizonimema esithangamini sabezindaba esisihlelela ikusasa (namhlanje) noma ngoLwesihlanu. Sizonazisa,” kusho uNkk Mqadi.
Ngokwe-website yalesi sikhungo kuvela ukuthi usizo lwemali siluthola eMnyangweni wezobuCiko namaSiko noMnyango wezokuThuthukiswa kwezoMnotho.
Kodwa lokhu kuphikiswe nguMnuz Mluleki Mntungwa okhulumela uMnyango wezobuCiko namaSiko othe lesi sikhungo kasikho eMnyangweni wabo.
“Asikakabi ngaphansi kwethu kodwa siseMnyangweni wezokuThuthukiswa koMnotho nokuvakasha ngakho shayela uBheko Madlala (okhulumela lo Mnyango). Isinqumo sokuthi sibe ngaphansi kwethu besingaka-thathwa,” kusho uMntungwa.
UMntungwa uvumile ukuthi bayasisiza lesi sikhungo waphika ukuthi basisiza ngemali.
“Siyabasiza lapha nalaphaya ngoba phela umculo ungena kwezobuciko. Enginga-kusho wukuthi usizo esibanika lona akusilona olwemali,” kucacisa uMntungwa ohlulekile wukucacisa ukuthi babasiza ngani.
UMadlala uphendule ngamafuphi wathi isikhungo sisizwa yibona.